Jiri mkpịsị aka gị see paleti ahụ na Breakboard Arkanoid ịke | Gam akporosis
Breakboard na-akpọrọ anyị gaa otu egwuregwu ahụ dị ka Arkanoid mythical n'ime nke anyị ga-enye bọọlụ na paddili ka ha ghara ịda. Ya mere, anyị na-eche otu mbọ ahụ ihu na nke a nke a na-ahụkarị site na ịdọrọ paleti ahụ.
Ma ọ gaghị abụ otu ugboro, kama oge ọ bụla anyị chọrọ ịkụ bọl ka a tụba ya na adabara trajectory ibibi niile nkanka na ị na-ahụ na ụzọ gị. Egwuregwu mara mma site na ụdị ya dị ka "pensụl pensụl" na nke ahụ na-enye ya nke ya iji mepụta egwuregwu nke masịrị site na mbido.
1 Kụchie ihe mgbochi niile na paddles ndị a dọtara
2 Agba ọsọ nke ink na Breakboard
3 Ihe eji eme nke ọma
Kụchie ihe mgbochi niile na paddles ndị a dọtara
Ebumnuche bụ pịa ozugbo na ihuenyo ka ịduzi ụzọ mbido bọọlụ mbụ nke mere na ozugbo, mgbe ọ kụrụ ụfọdụ n'ime mgbidi ma ọ bụ ihe mgbochi ndị ahụ iji bibie ha, anyị na-ese palette na ntanetị ma ọ bụ na-edozi ma si otú a bilie ọzọ iji bibie ihe mgbochi ọzọ.
El ebumnobi bụ imebi ihe nkanka niile na ọkwa ahụ ma ọ bụrụhaala na anyị ejighị ink niile anyị nwere site na karama dị na elu ihuenyo ahụ.
N'ihi ya see anyị egwuregwu na-aga nke ọma nke mgbe anyị bịarutere, anyị ga-ahụ ụfọdụ ezigbo oge ezumike. Ihe isi ike a bu n’amara otu esi ese ihe ndi a n’akuku aka nri ma obu ihu mmadu nke mere na bọọlụ na-aga n’ihu nkanka ma ha mechaa bibie ya.
Agba ọsọ nke ink na Breakboard
Ya mere, ọ bụrụ na anyị enweghị ike ibibi ihe niile ahụ, anyị ga-amalite ọkwa ahụ. Ewezuga ihe niile ekwuru, anyị ga-enwe enyemaka nke ụfọdụ ike-acha ọkụ nke na-esite na mgbochi ndị ahụ bibiri ma na-enye anyị ohere ịbawanye ọsọ nke bọọlụ ma ọ bụ ọbụna mee ya obere ka o wee nwee ike ịbanye na oghere ụfọdụ.
Na mkpokọta anyị nwere 100 aka ọrụ etoju na nke enweghị ụkọ ndị isi ikpeazụ nke mere na ihe niile dị mgbagwoju anya na anyị na-agba mgba site n'aka onye nrụpụta na-eweta iwetara anyị ụdị egwuregwu "Arkanoid" a.
Dị monetization Breakboard na-eji ume iji nye anyị ọtụtụ pensụl na minit iri na ise ọ bụla. Ọ bụrụ na pensụl agwụ anyị, anyị ga-echere ma ọ bụ gaa ndenye ọpụpụ ka anyị wee kpọọ. Otu ihe ahụ na-eme na kpakpando na ha ga-ekwe ka anyị soro larịị ebe anyị hapụrụ ka anyị wee ghara ịmalite.
Ihe eji eme nke ọma
Na njedebe anyị nwere mmetụta na Breakboard nke bụrụ onye na-eme ihe nkwụsịtụ nke nwere ike ịkwanye anyị na ọkwa ndị ahụ ejiri aka mee. Obere ntachi obi na obere nka ịmata otu esi adọta pallets ndị ahụ iji bibie ihe mgbochi, ọ nwere ike iwepụta ahụmịhe egwuregwu na-atọ ụtọ; ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndị dị otú ahụ a na-ekpo ọkụ ahụmahụ, echefula Ezigbo nwamba m.
Anya nwere ụdị pensụl pensụl ahụ nke oge obula anyi kuru ngọngọ ma mebie ya, ihe eserese emere na ya bụ nhichapụ a na-ehichapụ. Ya mere o yiri ka anyị na-egwuri egwu na padị eserese nke mkpịsị aka anyị na-aghọ pensụl iji jiri ya wee see lollipops ndị na-apụ n'anya mgbe anyị kụrụ bọl ahụ.
Breakboard bụ egwuregwu na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ nke a na-eji ike ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-egwu egwu. N'ezie, oburu na inwere ikike zuru oke, o gaghi adi na pensụl nke ha na-enye n'efu.
Na Arkanoid anyị nwere ezumike a nke ga - ejide gị ruo mgbe ị mechara ogo 100.
Usoro edemede: 6,6
See ihe naa i ga-eji kụọ
100 aka-e mere etoju
Jiri ike gwuo egwu
BreakBoard: Brick emebi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Jiri mkpịsị aka gị see paleti ahụ na Breakboard a la Arkanoid